NToALA oNYE NA NKA OGUGU IGBO KA O SI METUTA UMU AKWUKWO
Ihe ndị a ka a na-eme iji nwee izu ike. Ịmụ ihe bụ ụzọ e si enweta ezi ọgụgụ. N’ọmụmụ ihe, a na-agụmi ma na-agụsi ihe ọgụgụ ike iji wee gafee n’ule akwụkwọ. Ịji ezigbo nka ọgụgụ na-eweta ọganihu n’ọmụmụ na nkuzi asụsụ. Dị ka Alo (2001) si wee kwuo, ọgụgụ bụ ngwa dị oke mkpa mmadụ ji amụ ma na-esonye n’akụnaụba ọgbara ọhụrụ. N’agbanyeghi nke a, ọgụgụ na-akwado mmadụ n’ọrụ nwadiala. Ọ na-eme nke a site n’inye ya ike ịnara na ịyọchapụta ihe ndị niile e deturu n’akwụkwọ iji wee nye aka chepkwaba ahịrị, ụda na njimara ndụ ọha obodo. Baldeh (1990) dere iji kwado ihe ndị ọkammụta ndị ọzọ kwuru gbasara ọgụgụ. N’arụmarụ ụka ya, ọ kọwara na ọgụgụ na odide na-enyere ụmụ mmadụ aka inweta ihe. Enyemaka a na-eweta mgbamume nke na-akwalite isonye n’ọchịchị onye kwuo uche ya n’obodo a haziri ahazi. Ndị ọka mmụta niile n’agbanyeghi ebe onye tozuru etozu kwekọrịtara na ọgụgụ bụ isi ntughe n’usoro agụmakwụkwọ (Mgbodile, 1991). Ọtụtụ na ndị ọkachamara n’usoro agụmakwụkwọ ebidwo na-eti mkpu n’ihe gbasara ọdịda n’agụmakwụkwọ dị n’obodo ọkachasị Naịjịrịa.
Filed Under: ARTS EDUCATION PROJECT TOPICS AND MATERIALS Tagged With: AKWỤKWỌ, bụ, IGBO, inweta, KA, KA O SI METUTA, kwesiri, METUTA, METUTA UMU, n’ime, n’ogo, N’OKPURU, NA, na-amụ, NKA, NKA OGUGU IGBO, NSỤKA, NToALA, NToALA oNYE, O, OCHICHI, OGUGU, oNYE, oNYE NA NKA, otu, PRAIMARI, SI, ỤMỤ